Banyere Anyị - Suzhou Hanrui Electric Co., Ltd.
Igwe na-agwụ ike
Ewepụghị isi igwe
Suzhou Hanrui Electric Co., Ltd. emi odude ke Jiangsu Province, a mara mma mmiri obodo na ndịda nke Yangtze River, gbara ya gburugburu Shanghai, Nanjing, Suzhou Xichang na ndị ọzọ na obodo mepere emepe, na elu ọnọdụ na-adaba adaba njem. Thelọ ọrụ na-emepụta ihe dị na Jinfeng Town, Zhangjiagang City, mba ndị na-ahụ maka ọla, mba nke 48, okporo ụzọ Huarun.
The ụlọ ọrụ bụ a set nke ulo oru akpaaka usoro mmepe na mmepụta, na-abụghị ọkọlọtọ akpaaka ngwaahịa mmepe, mmepụta, ahịa na ọrụ dị ka otu n'ime oru ụlọ ọrụ.
Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ lekwasịrị anya na nyocha na mmepe, n'ichepụta na imepụta akụrụngwa na-enweghị ọkọlọtọ. Ugbu a isi ngwaahịa na-mepụtara na-emepụta: akpụcha, pneumatic igwe, haịdrọlik pịa, polishing igwe, belt ụdị nkenke polishing igwe, rotary anwụrụ ọnwụ igwe, chamfering igwe, ewepụghị isi igwe na-abụghị ọkọlọtọ anwụrụ akụrụngwa.
Companylọ ọrụ ahụ na-eji ụzọ sayensị dị elu na njikwa siri ike, na-agba mbọ maka izu okè, ma na-agba mbọ ịmepụta ụdị dị mma. Ọ na-agbaso ụkpụrụ nke àgwà mbụ, aha mbụ, na ụkpụrụ ọrụ ụlọ ọrụ. Ọ na-agbasi mbọ ike iji nye ngwaahịa kachasị mma na ọrụ zuru oke maka ndị na-ahụ maka njikwa na izute ihe ndị ahaziri nke ndị ahịa na azụmaahịa.
Nabata ndị ahịa n'ụlọ na mba ofesi ịbịa tụlee, rụọ ọrụ ọnụ iji mepụta amamiihe.